Date My Pet » Nei Usingafaniri Kuita Zvokupfimbana Nomusikana With ane Dog
kubudikidza Sebastian Harris
Nei Usingafaniri Kuita Zvokupfimbana Nomusikana With ane Dog
Last updated: Sep. 30 2020 | 3 Maminitsi verenga
Panguva ndiri noukama mukadzi kunoshamisa. Akanaka, akangwara uye zvechikadzi. Iye zvose ndaikwanisa nokusingaperi kukumbira. Chinhu bedzi dzimwe nguva annoys ini ndiye imbwa kake kuti nguva dzose anotanga kuwana godo, pose wandichatsvoda kana kuvambundira naye.
Ndoreva, Ndinofarira imbwa uye ndine imbwa kuti anogara panzvimbo mubereki wangu asi ndinomboora ndakarwadziwa chokuti handigoni kutsvoda naye pasina yokuzogumbura ane tinnitus kubva kuhukura pamusoro imbwa yake. Ndakatotanga kuvenga kuti chinhu chiduku, kusvikira ndaiziva kuti ave kiyi hwedu ukama hunofadza.
Ndinoziva zvinoita zvachose sebenzi asi pakunyanya Ndakafunga pamusoro unhu uye unhu nemusikana wangu, ndipo pandakaziva kuti imbwa yake angadai kufurirwa wake zvikuru kupfuura zvandaifunga.
Ini kumbofungidzira sei musikana wangu dai iye angadai asina kumutswa nenzira akabvumira naye kutarisira mumwe munhu. Ndakasvika pakugumisa kuti kunyange zvazvo kuchiri annoys ini kana imbwa yake haagumiri kuhukura, Ndine kumuonga nokuda akakwana iye zvakamubatsira kuva hwakanaka. Ndakazoziva kuti pakunyanya kuda musikana uyo sembwa chisarudzo chakanakisisa chandaigona ndamboita.
Dzimwe Ndine manzwiro kuti vana mazuva ano kumutsa vabereki vavo, Pane akarerwa nevabereki vavo. Somugumisiro kuti havasi kuwana mukana kuva nepfungwa basa, nokuti hapana munhu anovadzidzisa zvazvinoreva kuva mutoro chinhu kana mumwe munhu.
Kana ukaona kuti musikana muri kufambidzana zvachose hapana pfungwa basa, zvichida kumbova imbwa. Mumwe mukadzi uyo anokura aine imbwa rwoga anodzidza kutora pamusoro basa mumwe hwakanaka.
Iye anofanira kufamba naye, iye ane zvokudya naye uye iye anofanira kutora naye murapi wemhuka kana ari kurwara. Zvose zvinhu zvinoda pfungwa basa. Paunenge achifambidzana musikana ane pfungwa iyi mhosvawo mumwe munhu, unogona kuva tsvarakadenga nechokwadi chokuti pfungwa yake basa iri rakatokura kana totaura kuvanhu.
Kana iwe nokusingaperi kufunga kutanga mhuri nomukadzi, unofanira nani vanoguma noukama musikana ane pfungwa basa.
Unogona kuva nechokwadi kuti iye Ane Caring Unhu
Unoziva nhamba chimwe chinhu chinoita kuti vanhu vafare muhukama? Aihwa, nhamba chimwe chinhu tinotarisira kubuda ukama ane chokuita zvepabonde. Chii tinoda mukadzi anochenjerera isu. Varume vanoda vakadzi vane hanya unhu.
Izvi hazvina chokuita misbelief kuti tinoda kubatwa semadzimambo muukama. All tinoda kunzwa kuti musikana tiri pamwe ane hanya nesu. Kana pane imwe mhando musikana uyo zvimwe anoda kutarisira iwe kupfuura dzimwe musikana, ipapo munhu musikana ane imbwa.
Kuzvitarisira wembwa kunoda nguva uye kushivirira. Ini wambosangana mukadzi aiva imbwa uye ndiani asina aiva nehanya unhu. Iva nechokwadi chokuti musikana uyo imi vanoguma noukama anoda kutarisira vamwe vanhu, kusanganisira iwe.
Iye haasi Couch Potato
Ini ndiri wakazadzwa chaizvo pamusoro nemitambo. Ndinoda kuenda basketball uye kuva panguva matsva mhepo. Nokuda chokuti handina kufarira nokupedza zuva rose pamberi terevhizheni apo vhitamini D yangu pamwero anowana yakaderera uye ezasi, Ini ndiri asingafariri achifambidzana mubhedha mbatatisi.
Kana musikana uri kufambidzana ane imbwa, unogona kuva chokwadi chokuti iye chinhu asi simbe panhovo mbatatisi. Kana usingadi kuti imbwa poop yose uriri, unofanira kufamba imbwa yenyu kanenge kaviri pazuva.
Ini hunovimbisa kuti musikana ane imbwa asi anopedza nguva yake kunze kuva vanoshingaira, pane kutambisa nguva yake panhoo. Kunyange zvazvo ndiri zvausingafariri nokuda imbwa musikana wangu kana asingadi kurega kuhukura, Ndinonakidzwa patinenge kufamba naye.
5 Nzira Chisingafaniri Tech Vanotambura